Etching plate takelaka haingo vita amin'ny kofehy vy lovia haingam-pandeha - lovia vita amin'ny ezy - China Foshan Hermes Steel
Ny takelaka fizotra vy tsy misy fangarony dia fomba fantsom-panafody simika eo ambonin'ny vy tsy misy fangarony hanimba endrika sy lamina samihafa. Ny tontonana fitaratra 8K dia ampiasaina ho takelaka ambany, ary ny fizotra etching dia tanterahina. Ny faritra ambonin'ilay zavatra dia voakarakara kokoa. Ny takelaka vita amin'ny vy tsy misy fangarony dia azo zahana amin'ny fomba sarotra maro karazana toy ny fanaingoana ampahany, ny fanaovana sary, ny firaketana volamena, ary ny volamena titanium ampahany. Takelaka fanaovana sokitra vy tsy misy loko mahatalanjona ny vokan'ny lamina marevaka sy maizina ary loko mamirapiratra.
Ny fizotran'ny dingana dia:
Takelaka vy tsy misy fangarony → degreasing → fanasana → fanamainana → fanontana lamba → fanamainana → fandrobohana rano → ravin-kazo eo an-kavanana (ravina) fanasana → fanesorana ny ranomainty → fanasana → famaohana → fandokoana → ravina (ravina) fitsaboana manamafy → fanidiana famehezana → hosasana ny ravina (ravina) ary maina → diniho → vokatra.
Ny takelaka fanakorontanana dia ampiasaina matetika amin'ny haingon-trano amin'ny fiara ascenseur sy rakotra varavarana fidirana, takelaka fiakarana fiara, takelaka fiarakodia, takelaka misy rindrin-trano, ambadika, valindrihana, haingon-trano, takelaka misy hotely, hotely, toerana fialamboly, fivarotana marika avo lenta, ary tranobe avo lenta. Andraso.